Home Wararka Da’daalo lagu qaboojinayo xiisad colaadeed oo ka socota Baladweyne
Da’daalo lagu qaboojinayo xiisad colaadeed oo ka socota Baladweyne
Sida MOL horay idinkuugu soo tabisay, dagaalada u dhexeeyay labada maleeshiyo beeleed ayaa waxaa uu sigaar ah uga dhacay deegaan lagu magacaabo Doon Maleyka oo hoostega magaalada Baladweyne, kaasi oo salka ku haayo arrimo la xiriira lahaanshaha dhul-beereed.
Yusuf Daba geed ayaa kulamo kala duwan la qaadan Waxgaradka maleeshiyo beeleedka dagaalamayay labadii maalin ee lasoo dhaafay, isagoo kala hadli doona sidii loo joojin lahaa Colaada soo cusboonaatay. Sidoo kale Ciidanka Xoogga dalka qeybta 27-aad ayaa la filayaa inay kala qaadan maleeshiyaadka hubeysan oo isku hor-fadhiyada deegaanka Maleyka iyo tuulooyin kale, kuwaasi oo dagaalkii dhexmaray isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan.
Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaaladii ka dhacay duleedka Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan oo soo kala gaaray labada dhinac, waxaana sidoo kale la sheegay in la iska gubay Guryo. Si kastaba dagaalo u dhexeeyay maleeshiyo beeleedyo ayaa dhowr jeer sidaan oo kale uga dhacay duleedka Magaalada Baladweyne, kuwaasi oo salka ku haayay arrimo la xiriira dilal aano qabiil iyo murano ka dhashay dhulal la isku qabsaday.